निजामती सेवा ऐन बनाउँदै बागमती सरकार
सरकार सरिता दाहाल
संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले साझा ऐन बनाउन लागेको छ।
बागमतीका दुई संसदीय समितिमा चुनाव हुँदै, एमाले सांसदको मात्रै उम्मेदवारी
बागमती प्रदेश सभाका दुई समितिको नेतृत्व चयनका लागि आज चुनाव हुँदै छ। यसमा नेकपा (एमाले) का सांसदको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।
बागमतीबाट सत्तारूढ गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजयी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट सत्तारूढ गठबन्धनका दुवै उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
कांग्रेस बागमतीको सभापतिमा बानियाँ निर्वाचित नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भएका छन्।
बागमतीमा इन्द्र बानियाँलाई भीमसेनदास प्रधानको समर्थन नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको सभापतिमा भीमसेनदास प्रधानले इन्द्रबहादुर बानियाँलाई समर्थन गरेका छन्।
बागमतीको सभापतिका लागि बानियाँ र केसी फेरि प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिका लागि इन्द्रबहादुर बानियाँ र जगदीश्वर नरसिंह केसीबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
कांग्रेस सभापतिका लागि बागमतीमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको सभापति पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेस बागमतीको सभापतिमा बानियाँको उम्मेदवारी घोषणा नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्रबहादुर बानियाँले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
‘कुनै पदमा मेरो दाबी छैन, महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिन्छ’ ‘अझै समय छ नि! अहिले नै हतारिनुपर्ने केही छैन। मुख्य पदको टुङ्गो ढिलै लाग्छ। पदाधिकारीमा महिला हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएकी छु।’
बन्दले देशभरको जनजीवन प्रभावित पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदै, यस्तो छ समीकरण
राजनीति सरिता दाहाल
मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिहार लगत्तै विश्वासको मत लिने
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तिहार लगत्तै विश्वासको मत लिने भएका छन्। त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ।
राजेन्द्र पाण्डेले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
राजेन्द्र पाण्डेसँगै तीन मन्त्रीले शपथ लिने तयारी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आजै शपथ लिने तयारी गरेका छन्।
शाक्यले दिइन् राजीनामा, अब राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।
बागमतीमा पाण्डे र बानियाँलाई आठ-आठ महीना मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति बागमती प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसले आठ-आठ महीना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
गठबन्धनको तर्फबाट पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव विपक्षी गठबन्धनले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेलाई प्रस्ताव गरेको छ।
बागमतीको मुख्यमन्त्री पाण्डे कि बानियाँ? बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको भए पनि नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
बागमती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री कात्तिक पहिलो साता मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतका लागि आगामी ४ कात्तिकमा प्रदेश सभा बैठक बस्ने भएको छ।
बागमतीमा अब को बन्ला मुख्यमन्त्री? अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिएपछि बागमती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि गृहकार्य शुरू भएको छ।
विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाक्यको तयारी, यस्तो छ गणित बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलष्मी शाक्यले २४ असोजमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छन्। तर, कुनै राजनीतिक फेरबदल नभए उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।
विश्वासको मत लिंदै मुख्यमन्त्री शाक्य, गठबन्धनबाट दुई जनाको दाबेदारी नेकपा (एमाले) फुटेपछि अल्पमतमा परेको बागमती प्रदेश सरकारले २५ असोजमा विश्वासको मत लिने भएको छ।
‘बागमतीमा एकीकृत समाजवादीको मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी छ’ बागमती प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको नेत्री मुनु सिग्देलले बताएकी छन्।